Tareenka Zero-Emission ee Jarmalka ee Waddooyinka Coradia iLint | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAYURUB49 JarmalkaJarmalka Zero Emission Train ee Coradia NLS
Jarmalka Zero Emission Train ee Coradia NLS
04 / 11 / 2016 49 Jarmalka, YURUB, DUNIDA, tareenka, GUUD
Waddooyinka Tareenka ee Zero-Emission ee Coradia iLint Rails: Mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan maanta waa tamarta iyo tamar nadiifka ah. Arrinta ugu horreysa ee la qorsheeyay inay nadiif noqoto ka dib soosaarka waa gaadiidka. Waqti aad u yar gudahood, gawaarida qaxweynayaasha sare waxaa lagu beddeli doonaa baabuurta ay qiiqu ka yar yahay.
Xilligan kala guurka ah ayaa maalinba maalin la kulma. Jarmalka ayaa ka degay tareenka ugu horreeya ee eber-ka-baxa ah ee adduunka.
La kulan Coradia iLint, tareenka-eber-ka-baxa ee Jarmalka.
Coradia waxay ku soo degtay biraha biraha noociisa ah ee noociisa ah iLint. Tareenkan wuxuu ku shaqeeyaa mabda'a eber-ka waxaana ku shaqeeya hawo-mareenka.
Waxaa horeyba dalka Jarmalka uga jiray shabakad tareen oo sifiican u shaqeynaysa.
Jarmalka gudahiisa, 4 kun oo tareenka naaftada ah ayaa u adeegta malaayiin reer yurub ah baska maalin kasta.
Bilowga isbedelka dhaqanka xididka.
Coordia iLint waxaa loo arkaa bilow bilow ah mashruuca isbedelka tareenada naaftada, oo si ballaaran looga isticmaalo shabakadda tareenka ee Jarmalka oo dhan.
Xawaaraha tareenkan, isaga oo ku dhaqaaqaya eber dareeraha tamarta, sidoo kale waa mid aad u qanacsan.
Coradia iLint waxay gaari kartaa xawaaraha 140 km saacadiiba xawaarahaasna wuxuu ku shaqeyn doonaa waqti cufnaanta 800 km maalintii.
Wadamada kale ee Yurub waxay rabaan inay sameeyaan maalgashi la mid ah.
Maalgashiga tareenka bilaa lacag la’aanta ah waxaa sidoo kale mustaqbalka sameyn doona wadamada kale ee Yurub kuwaas oo quseeya arrimaha deegaanka xudunta ajandahooda. Wadamadan waxaa hogaamiya Norway, Denmark iyo Netherlands.
Tamarta tareenka dhab ahaantii waxay ka timaadaa tikniyoolajiyad aad caan u ah.
Tamarta Coradia iLint waxay ka timaadaa baytariyada lithium-ion. Baytariyadaani, kuwaas oo awood u siiya dhammaan aaladaha elektiroonigga ah, ayaa taangiyada hawo-biyoodka ee ku jira dusha sare ee tareenka tamarta waxayna ka dhigayaan inuu tareenka dhaqaaqo.
Tareenka waxaa soo saaray shirkadda Alstom oo markii hore shirkad Faransiis ah laakiin hawlo ka fulisa adduunka oo dhan.
St Alstom wuxuu ku hanweynahay hal-abuurka cusub ee ku saabsan safarka nadiifka ah, “ayuu yiri Henri Poupart-Lafarge, maamulaha shirkadda. Tareenkaani wuxuu muujiyaa sida aan si dhow ula shaqeyno macaamiisheenna iyo sida aan ku gaari karno howsha noocaas ah labo sano gudahood
Coradia iLint ayaa markii ugu horreysay laga dooday bishii Agoosto ee la soo dhaafay.
Waqtiga ugu yaabka badan ee InnoTrans 2016, oo ah mid ka mid ah carwooyinka gaadiidka ee ugu muhiimsan Yurub, wuxuu ahaa markii Coradia iLint ay markii ugu horeysay soo bandhigtay waaxda.
Tijaabooyinka tareenka dhulka hoostiisa mara waa sii socdaan.
Coradia waxay heli doontaa rakaabkeedii ugu horreeyay Diseembar 2017 kadib markay dhammeeyaan imtixaannada iLint.
Waxa kale oo jira dhaleeceyn isku dhafan oo tareenka ah.
Coradia iLint waxay u soo saartaa oo kaliya uumi baxa biyo-baxa sida unugyo-bax. Tani waxay kicineysaa dhaleeceyn ka imaata qeybo ka mid ah in tareenka uusan eber u ekaan.
Waxaan rajeynaynaa in tirada dhoofinta dadweynaha ee cagaaran ee noocan ah ay si dhakhso leh ugu kordho adduunka oo dhan.
Jarmalka New Speed ​​Train ICE 4 La soo Bandhigay
Coradia Polyvalent waxay noqon doontaa kan ugu wanaagsan ee rakaabka
Transdev si aad u hesho Tareenada Coradia Lint ee Alstom
Khadka tareenka cusub ayaa lagu dhisay Ulm, Jarmalka
Roobka ugu horreeya ee gudaha ee "Silkworm" oo ku yaala dhulka hoostiisa
Gaadiidka ugu horeeya ee degmada ayaa laga soo saaray saldhigyada Bursa
Samsun's Tram Tram Rush
Xerada 5 Pearl Tram Akçaray ayaa ku xiran tiirarka
Milkiilaha Xayawaanka Turkiga
Xarumaha Varsak-Bus Station Wadiiqooyinka ayaa yimid
Safarrada dhismaha Tramway ee ku yaal Bursa
Degmada Trabzon waxay ku duuduubtay xadhkaha nidaamka tareenka
Dhismaha ugu yar ee laga raaco Saldhiga Izban, Koshburun
Baha ŞENKÖK ayuu yiri:
Gaari yaab badan, aad u qurux badan, aad u qurux badan. Jaanteenna, our! LAAKIIN
Ma jiro wax la yiraahdo “Zero Emission !! Maaha sida loo eegaayo Dabeecadaha Dabeecadda! Haddii kale, waa inuu noqdaa nidaam ku saleysan nidaam guur-guureed ka-dib oo aan wali laga helin sayniska dabiiciga ah ee hadda jira, isla markaana aan dhaafin male-awaal. Tani waa xaqiiqo cad.
Xaqiiqdii, khudbadahaan vbg ee ujeeddooyinka xayeysiinta, waxyaabaha lahaan kara cudurdaar badan, nidaamyada haklı Qaabka saxda ah,… nidaamka ugu hooseeya adduunka çalışan iyo wixii la mid ah waa la adkeyn karaa. Sidan, aqbalaada waa la aqbali doonaa, la fahmi karo oo run ah. Sababtoo ah, liddi ku ah, su'aalaha soo socdaa waxay u baahan yihiin in laga jawaabo: Hidro Sidee hydrogen loo soo saaraa sidii shidaal? Waa maxay ka-tagista tamarta loo isticmaalo wax soo-saarka? Ka warran harka H2 Em Emission ka tamarta lagu kharash gareeyay soo saarista nidaamyada wax soo saarka? Maxaa ku dhacay?
Sida la arki karo, marka la soo koobo, marka loo eego Fikradda Aasaasiga ah ee Fiisigiska: olamaz Ma jiri karto, ma jiri karto waxba ”!